Carruurtu Ha Tweet
Arbacada, Oktoobar 6, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Matt Chandler
Qeybinta Da'da ee Shabakadaha Bulshada
Bishan waxaan bilaabay inaan barto koorso kuliyadeed oo ku saabsan Web Suuqgeynta ee Machadka Farshaxanka ee Indianapolis. Intooda badan 15ka arday ee fasalkeygu waxay kudhowyihiin qalinjabinta nashqadeynta dharka iyo suuq geynta tafaariiqda, koorsadayduna iyaga ayaa looga baahan yahay.
Xaqiiqdii, habeenkii ugu horreeyay markay ardaydu soo galaan shaybaarka kombiyuutarka oo ay fadhiistaan, waxay si buuxda iskood u soo xusheen kuwa waaweyn: 10-ka ardaydayda moodada midigta ah, shanta websaydh iyo ardayda naqshadeynta garaafka bidixdayda. Waxaan la mid ahaa dhaaniska dugsiga sare ee gabdhaha iyo wiilasha oo lagu beeray derbiyada ka soo horjeedka, dhinac walibana indhaha ku hayo kan kale si dagaal leh.
Markii aan dul maray manhajka iyo hordhaca koorsada, baraha bulshada ayaa qayb weyn ka qaatay. Waxaan is tusay in ardaydu dhamaantiin ay dhamaan doonaan, badankooduna goor hore ayey shaybaarka soo galeen si ay u eegaan emaylka iyo Facebook. Laakiin waxaan ku dhammaaday la yaab.
Qiyaastii saddex meelood laba meel fasalkaygu weligood ma isticmaalin ama xitaa ma eegin Twitter. Qaar badan oo ka mid ah xitaa ma aysan ogeyn waxa ay ahayd ama waxa loogu talagalay. Kaliya midkood ayaa barteeda ku qoray, mid kalena wuxuu lahaa degel u gaar ah.
Daanka Hits Floor
Sug, waxaad u jeeddaa inaad ii sheegto in jiillada ugu badan, isku xiran, had iyo jeer-aan isticmaaleyn aaladaha asalka bulshada? Warbaahintu miyey daa’intay khuraafaadka iyo beenta? Miyaan ku xiranahay adduunyadayda yar oo aan iska indhatiray qayb ka mid ah dadweynaha?
Markii aan arkay layaabkayga, mid ka mid ah ardaydayda ayaa ku jawaabay, "Oh, waxaan ku arkay Facebook: 'oo lagu soo qoray Twitter.' Marnaba ma aanan ogeyn inay taasi ahayd waxa ay ahayd. ”
Hagaag, markaa waxaan u ciyaarayay naxdinteyda saameynta majaajillada. Waxaan si buuxda uga warqabaa in korsashada aaladaha iyo kanaalada kaladuwan ay ku kala duwan yihiin, waxyaabo kale oo badan, da 'kooxeed. Waan ogahay in guusha Twitter ay ka heshay caan ka mid ahaanshaha dadka. Laakiin waxaan la yaabay sida badan oo ka mid ah horaantii-labaatan-baxsani xitaa aysan ogeyn waxa Twitter ahaa
Aynu Xisaab Qaadno
Tani waxay igu kalliftay inaan dib u noqdo oo aan eego cilmi-baaristii ugu dambaysay ee ku saabsan qaybinta da'da shabakadda bulshada. Bishii Febraayo 2010, adoo adeegsanaya xogta Google Ad Planner, Pingdom Royal waxay muujisay in guud ahaan 19-ka baraha bulshada ee ugu caansan, 18 - 24-jirrada lagu xisaabtamo kaliya 9% isticmaaleyaasha. Marka laga hadlayo Twitter, isla kooxdan waxaa lagu tiriyay wax ka yar 10%, iyadoo 64% dadka isticmaala Twitter ay yihiin 35 jir ama ka weyn.
Guud ahaan, 35-44 iyo 45-54 sano jir ayaa xukuma baraha bulshada, iyagoo matalaya isku darka 74% dadka isticmaala. Waxa xiisaha lihi, kuwa da'doodu udhaxeyso 0-17 (kumbuyuutarrada eber-jirka ah ee kombiyuutarada isticmaala?) Waxay u dhigantaa 21%, iyaga oo ka dhigaya kooxda labaad ee isticmaaleyaasha ah
Aynu si dhakhso leh horay ugu sii socono rubuc illaa May 2010 iyo daraasad ay samaysay Edison Research oo loogu magac daray "Isticmaalka Twitter In America: 2010." Sida laga soo xigtay cilmi-baaristooda, 18 - 24-jirada waxay ka dhigteen 11% isticmaalayaasha bil kasta ee Twitter-ka. Marka la isku daro 52%, kooxaha 25-34 iyo 35-44 ayaa wali gacanta ku haya.
Hadda, waxaa jira farqi weyn oo xagga xisaabta ah oo u dhexeeya tirada dadka halkan ku metelaya: 18-24 jirrada waxay gaarayaan toddobo sano halkii ay ka ahaan lahaayeen 10-ka kuwa kale oo dhan. Markaa waxaa jira xoogaa farqi ah oo loogu talagalay in lagu shaandheeyo tirooyinka ku saleysan burburkaan, laakiin waxaan hubaa inaan si dhab ah u hubo inay dhammaantood ku soo baxayaan dhaqidda.
Maxay ugu fadhiisan la’yihiin guddiga?
Haddii aan rumeysanahay casharkeyga koowaad ee simistarka, isku aadka aasaasiga ah ee suuqgeynta websaydhka ayaa ah in waxa ku jira ay tahay inay siiyaan macaamiisha qiimo. Sida laga soo xigtay ardaydayda, badankood shaqsiyan ma garanayaan qof si ballaaran u isticmaalaya Twitter. Sidaa darteed goobta iyo adeeggeedu qiimo ma laha.
Marka labaad, qof kasta oo fasalka ka mid ah ayaa hubinayay Facebook. Qaarkood waxay soo sheegeen inay arkeen ereyada "via Twitter" ee cusbooneysiinta xaaladda, taasoo muujineysa in qaar ka mid ah saaxiibadood ay runti isticmaalaan Twitter. Tani waxay cadeyneysaa qeybta labaad ee casharkeyga (iyo qeyb weyn oo ka mid ah Weerar moodeelka ganacsiga), kaas oo ahaa inaanay ahayn madal muhiim ah, ee ay tahay waxa ku jira. Iyagu ma aysan danaynin halka ay cusbooneysiintu ka soo bilaabatay, waxay ogaayeen oo keliya inay ka heli karaan barxadda ay doorteen.
Ugu dambeyntiina, labadaba xogta cilmi baarista ee kor ku xusan iyo cadeymaheyga sheeko xariirka ah waxay tilmaamayaan fikirka weyn ee ah in ardayda kulleejadu ay aad ugu mashquulsan yihiin sameynta waxyaabo kale si ay si joogto ah u hubiyaan (ama u hubiyaan) goobo badan, shabakado iyo barnaamijyo. Qaar badan oo ka mid ahi waxay soo sheegeen inay wakhti ku qaateen shaqada koorsada iyo inay shaqeeyaan shaqooyin waqti dhiman ah halkii ay ku khiyaanayn lahaayeen internetka.
Marka Maxaan Sameynaa?
Markaan nahay suuqleyda internetka waa inaan fahamno oo aan qaadanno kala duwanaanshaha adeegsiga ee kooxaha da 'kala duwan. Waa inaan u qaadanaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin dadka aan dooneyno inaan gaarno iyagoo adeegsanaya aaladaha ay sida dhabta ah u isticmaalaan. Tan waxaa lagu dhammeeyaa cilmi-baaris dhammaystiran iyo qorsheyn loogu talagalay waxqabadyada khadka tooska ah, iyo iyadoo la ogaanayo meelaha laga kormeero, dhexdhexaadka ah iyo cabirka. Haddii kale, waqti, dadaal iyo lacag ayaan ku tuuraynaa dabaysha waxaanan rajeynaynaa macaamiisha saxda ah inay qabsadaan.
Tags: da'dada'da loo qaybiyolaura lippaywarbaahinta bulshadaTwitter
B2B: Fiidiyowyadu waxay saameyn ku leeyihiin go'aamada wax iibsiga
Oktoobar 6, 2010 at 5:25 PM
Si aad u xiiso badan oo xiiso leh, gaar ahaan muuqaalkaaga intaa ka badan lambarrada. In kasta oo tirada dadka da'da yar aysan daruuri u aheyn inay ku soo biiraan Twitter, waxay arkeen waxa ku jira hal dhinac ama mid kale maaddaama dhammaan dhexdhexaadiyayaashan kala duwan ay isu yimaadaan, sidaas darteed weli waa u qalantaa in looga faa'iideysto Twitter da 'daan.
Oktoobar 7, 2010 at 8:38 AM
Waxaan xasuustaa wiilkaygu markuu igu qoslay markuu dugsiga sare dhiganayay inta iimaylka u adeegsado. Hadda oo uu ka sarreeyo IUPUI, emaylku waa lama huraan oo xitaa wuxuu u beddelay taleefan casri ah si uu ula socdo. Ma aqaan in dhallinyarnimadu dhaqaajiso dabeecadda, waxaan u maleynayaa in loo baahan yahay waa waxa keena. Twitter-ka aad buu iigu fudud yahay dheefshiidka iyo kala-shaandheynta macluumaadka, halka Facebook uu wax badan ka yahay shabakaddeyda iyo xiriirkeyga shaqsiyeed. Layaabi maayo haddii wiilkeygu 'tweeting' ku noqdo dhowr sano si uu ula wadaago macluumaadka shabakadiisa si hufan.
Oktoobar 7, 2010 at 9:53 PM
Wiil, ma ku dhacday neerfaha! Doug Karr ayaa kuu sheegi doona inuu la hadlay dhowr fasal oo aan ka qaatay IUPUI oo laga yaabo inuu ilaaway sida ay u yaraayeen! Xaqiiq ahaan, iyagu si cad ugama aysan hadlin warbaahinta bulshada, laakiin waxaan si aad ah ugu isticmaalay baraha bulshada koorsooyinkeyga mar walbana dhib ayaan kala kulmaayay in ardayda ay "wax ka iibsadaan" qiimaha baraha bulshada ay u leeyihiin barashada iyo sumcadda shaqsiyeed.
Mid ka mid ah sababihii aan uga soo tagay akadeemiyadda waxay ahayd "ma jirin qof iibsanaya wixii aan iibin lahaa" sidaa darteed waxaan u dhaqaaqay si aan u helo dadaal kale oo ay dadweynuhu diyaar u yihiin inay ikhtiraacaan barista iyo barashada, suuqgeynta, ama wax kasta! Waxaan qabaa dareen xun oo wakhti qaadan kara, laakiin waxaan haystaa waqti iyo dulqaad aan ku sugo iyo inaan naftayda waxbadan barto inta aan sugayo. O :-)
Oktoobar 9, 2010 at 10:46 PM
Waxaan moodayay inay annaga uun tahay. Waxaan dareemayaa fiicnaan hadda ogahay in dadka kale ay la kulmayaan isla wax. Xilliga kuleylaha, Jaamacadda Marian waxay kafaala qaaday HobNob 2010, munaasabad isku xirnaanta siyaasadeed oo ay qabanqaabisay Rugta Ganacsiga ee Greater Indianapolis. Jaamacadda Marian waxay ahayd kafaala qaaday baraha bulshada. Waxaan isku daynay inaan ardayda ku qorno Facebook iyo e-mayl Tweet kahor, inta lagu gudajiray, iyo kadib dhacdada anagoo ku badalanayna Polo MU lacag la’aan ah iyo cunno fiican Si fiican ayey u shaqeysay, laakiin way adkayd in la qoro ardayda. Real adag. Kadibna waxay ahayd inaan tababarno. Malaha mar dambe iskuma dayi doonno.
Oktoobar 10, 2010 at 10:08 PM
Dhallinyarada barta Twitter? Kaliya in "cyberstalk celebs". Waxaan weydiiyay!
Oktoobar 13, 2010 at 11:51 AM
Waan ka xumahay jawaabta daahday, waan xanuunsanayay.
Waa bar xiisa badan. Fasalkaygu waa Suuqgeynta Webka, 2/3 ee fasalkayguna wuxuu kakooban yahay suuqyada tafaariiqda tafaariiqda ee waaweyn. Hase yeeshe xitaa arrimaha aasaasiga ah ee suuqgeynta internetka ayaa gebi ahaanba ajnabi ah, in kasta oo ay yihiin koox da 'ahaan loo malaynayo inay sidaas isugu xidhan yihiin oo si naxariis darro ah loogu suuq geeyo.
Iyagu miyey ku wanaagsan yihiin kala shaandheynta farriimaha suuq-geynta? Miyeysan ka warqabin taatikada loo adeegsado? Mise runti ma adeegsanayaan qalabka sida ay suuqleydu jeclaan lahaayeen inay aaminaan?
Waan hubaa inaan haysto wax badan oo aan idhaahdo markaynu ku sii socono rubuca waxaanan xushaa maskaxdooda.